Raw AICAR ntụ ntụ (2627-69-2) Nsukka - Phcoker Chemical
Raw AICAR ntụ ntụ (2627-69-2)
AICAR ntụ ntụ, nke a makwaara dị ka AICA riboside, bụ purine precursor na antineoplastic ọrụ na onye na-ahọpụta ọrụ AMP-activated ... ..
Akwukwo uhie AWAR AICAR (2627-69-2) video
Raw AICAR ntụ ntụ (2627-69-2) Nkọwa
Raw AICAR ntụ ntụ nke a makwaara dị ka ZMP bụ analọg nke AMP nke nwere ikike ịme AMP-dependent protein kinase ọrụ (AMPK). Raw AICAR ntụ ntụ bụ ihe dị n'etiti ọgbọ nke inosine monophosphate. Raw AICAR ntụ ntụ a na-eji nlezianya na-agwọ ma chebe ya pụọ ​​na mmerụ nke ọrịa obi, ọ nwere ike itinye mkpụrụ ndụ mkpụrụ obi iji gbochie adenosine kinase na adenosine deaminase. Ọ na-eme ka ọnụ ọgụgụ nke nucleotide re-synthesis na-amụba adenosine emana site na adenosine monophosphate nanị n'oge ọnọdụ myocardial ischemia. Raw AICAR ntụ ntụ na-eme ka mmụba glucose site n'ibelata ntụgharị nke GLUT4 na / ma ọ bụ site na imegharị ụzọ ụzọ p38 MAPK. Ka ọ dị ugbu a, egosila ọgwụ ahụ dịka ọgwụgwọ nwere ike ịgwọ ọrịa shuga site na ịba ụba arụ ọrụ metabolic nke anụ ahụ site na ịgbanwe agbanwe nke ahụ ike.
Raw AICAR ntụ ntụ (2627-69-2) Smmezi
Product Name Raw AICAR ntụ ntụ
Chemical Aha 1-ribosyl-4-carboxamido-5-aminoimidazole, ARA 100, ARA-100, ARA100, GP 1 110, 5-aminoimidazole-4-carboxamide 1-ribofuranoside, 5-aminoimidazole-4-carboxamide riboside, acadesine, AICA ribofuranoside, AicA riboside, aminoimidazole carboxamide ribonucleoside, arasine, Z-riboside
Klaasị ọgwụ ọjọọ SARM
molekụla Fnhazi C9H14N4O5
molekụla Wasatọ 258.23
Nkịtị Monoisotopic 258.096 g / mol
Mgbu Point 214-215 ° C
Fna-agbanyeghachi Point 214 ° C
Ọkara Ndụ nke Ndụ Dị nkenke
Sume H2O:> 10 mg / mL
Raw AICAR ntụ ntụ Antinye AMPK activator
Raw AICAR ntụ ntụ a makwaara dị ka ZMP bụ analọg nke AMP, bụ Cell-permeable, allosteric activator nke AMP-activated protein kinase (AMPK). Ọ bụ ikike nke protein protein protein protein AMP-protein (AMPK) na-akpali akpali, na-eme ka ụbụrụ dị iche iche, nke dị iche iche na nchịkwa nke ụbụrụ MC3T3-EI nke osteoblastic na-adọta ụbụrụ nke cytokines proinflammatory na iNOS na astrocytes.
Raw AICAR ntụ ntụ bụ ihe dị n'etiti ọgbọ nke inosine monophosphate. Raw AICAR ntụ ntụ a na-eji nlezianya na-agwọ ma chebe ya pụọ ​​na mmerụ nke ọrịa obi, ọ nwere ike itinye mkpụrụ ndụ mkpụrụ obi iji gbochie adenosine kinase na adenosine deaminase. Ọ na-eme ka ọnụ ọgụgụ nke nucleotide re-synthesis na-amụba adenosine emana site na adenosine monophosphate nanị n'oge ọnọdụ myocardial ischemia. Raw AICAR ntụ ntụ na-eme ka mmụba glucose site n'ibelata ntụgharị nke GLUT4 na / ma ọ bụ site na imegharị ụzọ ụzọ p38 MAPK. Ka ọ dị ugbu a, egosila ọgwụ ahụ dịka ọgwụgwọ nwere ike ịgwọ ọrịa shuga site na ịba ụba arụ ọrụ metabolic nke anụ ahụ site na ịgbanwe agbanwe nke ahụ ike.
AICAR bụ purine precursor na antineoplastic ọrụ. Ọ dị mkpa n'ịgwọ ọrịa ọrịa metabolic dịka ụdị ọrịa shuga 2 na ọgwụgwọ dị iche iche nke ụdị ọrịa cancer.
AICAR ntụ ntụ (2627-69-2) Ngosipụta nke Action
Ụdị nke AICAR, acadesine, bụ ihe analog nke adenosine nke na-abanye n'ime mkpụrụ ndụ mkpụrụ obi iji gbochie adenosine kinase na adenosine deaminase. Ọ na-eme ka ọnụ ọgụgụ nke nucleotide re-synthesis na-amụba adenosine emana site na adenosine monophosphate nanị n'oge ọnọdụ myocardial ischemia. Na myocytes obi, Acadesine na-esi phosphorylated na AICAR iji mee ka AMPK rụọ ọrụ n'enweghị agbanwe agbanwe nke nucleotides. AICAR nwere ike ịbanye n'okporo ụzọ nke ụzọ mgbapụta maka adenosine synthesis iji gbochie adenosine deaminase na-eme ka mmụba nke ọkwa ATP na ọkwa adenosine.
Njikere AICAR (2627-69-2)
▪ Ọkpụkpụ na-egbuke egbuke
▪ Ọgwụ ọjọọ na-arụ ọrụ
▪ Glucose na-akpali akpali
▪ AMPK activator
▪ Nsogbu mberede
▪ Nnukwu ọrịa leukemia lymphoblastic
-atụ aro AICAR ntụ ntụ (2627-69-2) Ụdị
Ihe eji eme ihe maka AICAR nwere ike ịdị na 150 mg ụbọchị ọ bụla, ma ọ bụrụ na ị na-atụ ya na GW, na gburugburu 500 mg kwa ụbọchị mgbe ị na-eji ya n'onwe ya. Kwaini ọ bụla na-abịa na 50 mg dosages, ya mere na ọ bụ n'ezie ọnụ. Maka nke a, ọ bụ ihe ezi uche na-eji ya na izu anọ gara aga tupu ụbọchị asọmpi ahụ.
uru nke AICAR ntụ ntụ (2627-69-2)
♦ AICAR bụ purine precursor na ọrụ antineoplastic. Ọ dị mkpa n'ịgwọ ọrịa ọrịa metabolic dịka ụdị ọrịa shuga 2 na ọgwụgwọ dị iche iche nke ụdị ọrịa cancer.
♦ Ngwa AICAR maka ịgwọ ọrịa mberede.
♦ AICAR nwere ike ịgwọ ọrịa maka ịgwọ ọrịa ọrịa neuroinflammatory ebe microglia na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ etiological.
♦ AICAR na-enyere aka melite moto, ọrụ nchekwa na ọrụ ụbụrụ
♦ AICAR kachasị mma dị ka nsonye na nchịkọta ntachi. Ndị na-eme egwuregwu na-ejikwa ya eme ihe n'ịme egwuregwu na-eme ka ha nwee ntachi obi.
♦ AICAR bụ ihe analogue nke nwere ike ịbanye n'ime ọdọ mmiri dị iche iche ma nwee ike imewanye ọkwa nke adenosine n'oge oge nbibi ATP. Achọpụtawo ndị mmadụ na-achịkwa adenosine (ARAs) maka ọgwụgwọ ọgwụ na mychardial ischemia.
♦ AICAR na-eji maka ọgwụgwọ nke ọrịa leukemia lymphoblastic dị oke njọ ma na-akọ na enwere mmetụta ọkpụkpụ.
Tee Tianeptine hemisulfate monohydrate (1224690-84-9)
Raw (R) -Oxiracetam ntụ ntụ (68252-28-8)